Myanmar, Sri Lanka hold 3rd meeting of joint commission for bilateral cooperation – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar, Sri Lanka hold 3rd meeting of joint commission for bilateral cooperation
The Third Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between Myanmar and Sri Lanka was held at 3:30 pm on 11 April 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw. The meeting was co-chaired by U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation of the Republic of the Union of Myanmar and Mr. Tilak Marapana, Minister of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
During the meeting, the two sides discussed matters pertaining to strengthening bilateral relations and deepening bilateral cooperation in various sectors includes exchange of high level visits, trade and investment, tourism, religious and cultural affairs, transport and industrial sectors. They also exchanged views on regional and global issues of mutual interest as well as for closer cooperation in the multilateral context. The two Ministers then signed the Agreed Minutes of the Meeting.
In the evening, the Union Minister for International Cooperation hostedadinner in honour of the visiting Foreign Minister of Sri Lanka and his delegation at Shwe San Eain Hotel in Nay Pyi Taw.
The Sri Lankan Foreign Minister and his delegation will also be visiting places of cultural and religious significance in Bagan and Yangon before leaving Myanmar on 15 April 2019.
မြန်မာ-သီရိလင်္ကာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်၏ တတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပ
(၁၁-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
မြန်မာ-သီရိလင်္ကာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်၏ တတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်၊ ၁၅၃၀ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ တီလက် မာရာပါနာတို့မှ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များက နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန် စီစဉ်သွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း အပါအဝင် ကဏ္ဍစုံ၌ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်တိုးချဲ့သွားနိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာ အကျိုးတူကိစ္စရပ်များနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေးအတွက် ဆွေးနွေး အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ဝန်ကြီးများသည် မြန်မာ-သီရိလင်္ကာ ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ညနေပိုင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ရွှေစံအိမ်ဟိုတယ်၌ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။
သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် ပုဂံမြို့နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့ရှိ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အထင်ကရ နေရာများသို့လည်း သွားရောက်လည်ပတ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။